24.03.2020 Coronavirus Rondedzero Yakaitika: Nhamba yeVanoporesa Varwere 26 | RayHaber | raillynews
mushaGENERALLAST MinUTEcoronavirus24.03.2020 Coronavirus Ruzivo Rwakawandisa: Nhamba yeVanoporesa Varwere 26
24.03.2020 Coronavirus Ruzivo Rwakawandisa: Nhamba yeVanoporesa Varwere 26
Turkey Gurukota Health - Dr. Fahrettin Koca
tafura kuratidza ichangobva mamiriro ezvinhu maererano # Coronavirus nyaya muTurkey, yakaparidzwa pamwe paruzhinji.
Nhamba yemhosva: 1.872
Kutarisirwa kwakanyanya: 136
Intubated (Anodzvinyirira murwere): 102
Turkey Corona utachiwana murwere mazita
Twiti, uyo akatsanangura coronavirus chiyero che 24.03.2020, Gurukota rezvehutano, Fahrettin Koca, akange ari anotevera.
Vangani vanhu? Izvi zvinobvunzwa zuva rega rega mu 195 nyika. Nokurasikirwa uye kana asina kunonoka kuti Turkey. Chiyero chinogona kudzivirira kuwedzera. Kwese kwakasvika 24 bvunzo dzakaitwa muZVIRI MUKATI maHURE. Pane 3.952 zvitsva zvinowanikwa. Takarasikirwa nevarwere vedu vanomwe. Mumwe waive murwere weCOPD. Vatanhatu vaive vezera rechikuru. Isu takasimba seyero yatakatora.
Parizvino, akaedzwa 27.969 akaongororwa, 1.872 yakaonekwa, uye isu takarasikirwa nevarwere makumi mana nemasere, vazhinji vavo vari vakweguru uye varwere veCOPD.
11.03.2020 - Ese 1 Nyaya
13.03.2020 - Ese 5 Nyaya
14.03.2020 - Ese 6 Nyaya
15.03.2020 - Ese 18 Nyaya
16.03.2020 - Ese 47 Nyaya
17.03.2020 - Hwese 98 Nyaya + 1 Dzakafa
18.03.2020 - Hwese 191 Nyaya + 2 Dzakafa
19.03.2020 - Hwese 359 Nyaya + 4 Dzakafa
20.03.2020 - Hwese 670 Nyaya + 9 Dzakafa
21.03.2020 - Hwese 947 Nyaya + 21 Dzakafa
22.03.2020 - Hwese 1256 Nyaya + 30 Dzakafa
23.03.2020 - Hwese 1529 Nyaya + 37 Dzakafa
24.03.2020 - Nyaya 1872 dzakazara
Gurukota rehutano Fahrettin Koca uye Gurukota reNational Education Ziya Selçuk vakataura kunhengo dzenhau mushure memusangano weCoronavirus weSainzi Musangano. Minister Koca vakapa ruzivo nezve skrini iyo nhamba yematare ichaziviswa.
Achisimbisa kuti hapana sangano rehutano kana chero chiremba anogona kudzivirira kutapurirana kwehutachiona, Koca akati, "Unogona kudzivirira izvi." Iwe unogona kuzvidzivirira nekuenda kumba kwako. Iwe unogona kuzvidzivirira nekupfeka mask kana zvichidikanwa. Unogona kuzvidzivirira nekudzivirira kusangana. Nyika yedu yakasimba muhondo iyi. Ndisu tichagona kuwana mibairo nesimba iri. "
"Huwandu hwevanhu vane makore epakati hahuregere"
Achitaura kune avo vachembera, Koca akati, "Huwandu hwevakadzi vepakati haupere." Hutachiona hahureure pakati pevechidiki, vakuru uye vezera repakati. Kana uine chirwere chausingazive, hutachiona hucharatidza uye kurapwa kwacho kuchanyanya kuoma kupfuura zvawaitarisira. ”
"Ndokumbirawo kuti musaone sekushandisa sezororo"
Achiyeuchidza kuti dzidzo yevana inoenderera mberi, Minister Fahrettin Koca vakati:
"Kudzidziswa kunopihwa pamusoro pe internet uye terevhizheni kwechinguva. Ndokumbirawo usatarise iyo application sezororo, dzivirira vana vako kuti vanzwisise chinyorwa seichi. "Havafanirwe kusiiwa kubva kuzvidzidzo zvavo neshamwari."
Ruzivo ruchazovandudzwa nedhijitari uye kugovaniswa neruzhinji mazuva ese.
Gurukota Koca akagovana neruzivo runotevera nezve chikumbiro chinofanirwa kuitirwa kuti ruzhinji ruwane ruzivo rwakareruka uye rwakajeka munguva inotevera:
"Munguva inotevera, isu tichagara tichivandudza huwandu hwevarwere, huwandu hwebvunzo, huwandu hwenyaya dzatakarasikirwa, huwandu hwevarwere vari mukuchengetedzwa kwakanyanya, huwandu hwevarwere hwakabatana neiyo yekuvharidzira, mudziyo wekufema, uye huwandu hwevarwere vanoporesa, uye tichagoverwa zuva nezuva neruzhinji."
Mishonga kubva kuChina
Vachitaura nezve huwandu hwemishonga yakatorwa kuChina nekushandiswa kwavo muvarwere, Minister Koca vakati, "varwere 136 vakatangwa. Iyo piritsi yekurapa ndeyechokwadi. Isu tinoziva kuti dofo uye avhareji bhokisi rine kurudziro kubva kuSainzi Komiti inoshandiswa kune murwere, uye kanenge mazuva mashanu ekushandiswa. Tichakwanisa kutaura zvakajeka musvondo rinotevera kuti rinobatsira here kana kuti kwete. ”
"Mamirioni makumi masere nematatu haafanire kuongororwa"
Koca akatsanangurawo pamusoro pekuti ndiani anofanira kuongorora bvunzo idzi ndokuti, "Mamiriyoni makumi masere nemasere vanhu havafanire kuongororwa, hapana zvakadaro munyika. Nekuti kana iwe uine bvunzo, inogona kunge isina kunaka, asi inogona kuva yakanaka mushure memazuva matatu nemazuva mashanu. Unogona kutapudza vanhu vazhinji panguva iyoyo. Munhu wese anofanira kuita seanotakura hutachiona, ”akadaro.
Zvinoratidzwa zvakakwirira kubva pane zvakataurwa negurukota Selçuk ndizvo zvinotevera:
Gurukota Ziya Selçuk akataura kuti nerudzidziso rweDare reSainzi, vakasarudza kuti zvikoro zvinofanirwa kunge zviri pazororo kusvika musi wa 30 Kubvumbi uye kuti fundo yemakiromita inofanira kuenderera mukati mematanho eiyo coronavirus matanho.
Aona kuti maitiro aya aive dambudziko rakasangana kekutanga munhoroondo yenyika, Selçuk akasimbisa kuti vanoona iyi nyaya seShumiro nekufungidzira uye kukosha kwehutano ndeyevana.
"Takagadzirira mhando dzese dzenzvimbo dzinoenderana nekubhadharwa kwezvinodiwa pakudzidza uye bvunzo"
Achitaura kuti vaenderere mberi nedzidzo yavo nemhando yepamusoro uye zvirongwa zvizere kutanga svondo rinouya, Selçuk akati:
“Ndinoda kuti vagari vedu vese nevabereki vafare. Isu takagadzirira marudzi ese ezviitiko zvine chekuita nekupedzwa uye muripo wezvido zvedzidzo yevana venyu uye bvunzo. Hapana munhu anofanira kunetseka kuti tichaita zvinodiwa.
Minister Selçuk vakataura kuti nguva nenguva, vachazivisa veruzhinji uye kugovera zvimwe zvine chekuita nemimwe mitemo, zvavanoda uye bvunzo zvine chekuita nebazi reNational Education.
22.03.2020/30/XNUMX Turkey Coronavirus Report: Total Number wevarwere wemufi yaiva XNUMX!
Mamiriro ekupedzisira muTrabzon Light Rail System Project, iyi ndiyo nzira yakajeka
24.03.2020 Coronavirus Chirevo: Isu Takarasikirwa Nevamwe Varwere
25.03.2020 Coronavirus Chirevo: Isu Takarasikirwa Avhareji ye59 Varwere
26.03.2020 Coronavirus Chirevo: Isu Takarasikirwa Avhareji ye75 Varwere
27.03.2020 Coronavirus Chirevo: Isu Takarasikirwa Avhareji ye92 Varwere
28.03.2020 Coronavirus Chirevo: Isu Takarasikirwa Avhareji ye92 Varwere
30.03.2020 Coronavirus Chirevo: Isu Takarasikirwa Avhareji ye168 Varwere
31.03.2020 Coronavirus Chirevo: Isu Takarasikirwa Avhareji ye214 Varwere
Chipatara chakarwara munzira
Dzorera Varwere Vasina Chando
Ngirozi Dzvuku Dzinoponesa Mwoyo Usina Chando, Zuva
Air conditioners inoshanda zvisina kukodzera mune dzimwe ngoro muBursaRay vanoita kuti vatakuri varwere
Mutyairi wemasrobus akabva pavanorwara achifamba mumugwagwa